कोरोनाले खोजेको आधारभूत सुशासन « Janata Samachar
कोरोनाले खोजेको आधारभूत सुशासन
प्रकाशित मिति : 14 March, 2020 8:55 pm
यतिखेर सिङ्गो विश्व कोरोना भाइरसका कारण त्रसित र आतंकित छ । यसबाट हामी पनि आतंकित त होइन त्रसित र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यद्यपि कोरोनाको उद्गमस्थल छिमेकी मुलुक चीनले आफूलाई कोरोना मुक्त घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमण १ सय ४० मुलुक पुगिसकेको छ । अझै तीब्र रुपमा फैलिने क्रममा छ । यसले नेपालमा पनि महामारीको रुप लिन्छ कि भन्ने डर र त्रास छ । यसबाट त्रसित हुनुपर्ने कारण के हो ? कोरोना नेपालमा पस्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेबारे सरकारका सम्बन्धित निकायले छलफल गरिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा छैन ।
मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको विद्यमान प्रविधिले रोगको पहिचान, उपचार र रोकथाम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा छैन । कार्यशैली भन्दा पनि हाम्रा पूर्वाधार र कारण जनमानस आस्वस्त हुन नसकेको हो । उपचार र रोकथाम बारेमा त धेरै देशका जनतासँग आफ्ना सरकार प्रतिविश्वास हुन सकिरहेका छैनन् । तर हाम्री कहाँ प्रकोप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छैन भन्ने हो । आधारभूत सुसाशनको प्रत्याभूति नभएसम्म अविश्वास रहिरहन्छ ।
कोरोनाका कारण खास गरी पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै व्यावसायिक क्षेत्र धरासायी बन्दैछन् । यसको प्रकोप विश्वका विभिन्न मुलुकमा लामो समयसम्म रहे त्यसबाट नेपाल समेत प्रभावित हुनेछ । अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटनसँग सम्वन्धित उड्यन, यातायात, होटल र रेष्टुराँ लगायतका क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभए ती क्षेत्रमा अझै असर पर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ ।
खाना खानुअघि हात धोऔँ’ भन्ने सन्देश रेडियोबाट प्रसारण हुन थालेको ३ दशक नाघिसेको छ । अहिले पनि त्यो सन्देशको आफ्नै महत्व छ । कोरोनाले यसको महत्वपूर्ण अझै बढाएको छ । हो यसलाई परिस्कृत बनाउनु आवश्यक छ । हातधुने कुरा भन्दा पनि बढी कसरी धुने ? भन्ने तरिकाबारे सिकाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो
सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गर्नुपरेको छ । त्यति मात्र होइन यसको प्रकोप लम्बियो भने हामीले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त गरिरहेको विप्रेषणमा समेत ठूलो असर पर्नेछ । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिती र भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्नेछ । राजश्वको संकलन लक्ष्य भन्दा धेरै तल झर्नेछ । अर्थतन्त्रमा गुणनात्मक ढंगलले नकारात्मक संकेत देखिनेछन् । राष्ट्रिय संकटको रुप लियो भने यसले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउनेछ । त्यसैले त्यस्ता असर कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे सरकार, नीति निर्माता र सम्वन्धित सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । यससँग सम्बन्धित उपयुक्त केही पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
शिक्षामुलक कार्यक्रम र जनचेतना बढाऊँ
हामीलाई थाहा छ, ‘खाना खानुअघि हात धोऔँ’ भन्ने सन्देश रेडियोबाट प्रसारण हुन थालेको ३ दशक नाघिसेको छ । अहिले पनि त्यो सन्देशको आफ्नै महत्व छ । कोरोनाले यसको महत्वपूर्ण अझै बढाएको छ । हो यसलाई परिस्कृत बनाउनु आवश्यक छ । हातधुने कुरा भन्दा पनि बढी कसरी धुने ? भन्ने तरिकाबारे सिकाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसो त जतिसुकै शिक्षित नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकमा पनि यस्ता सन्देश प्रसारण गर्नैपर्ने हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सधैं सजग बनाई राख्नुपर्छ । सतर्कका लागि, पुनर्ताजकीका लागि, अनि व्यवहारमा उतार्नका लागि ।
अतः नेपालको मौसम, हावापानी र तापक्रमलाई समेत आधार बनाएर कोरोना भाइरसबाट जोगिन के गर्ने ? संक्रमित भएको शंका परीक्षण कसरी गर्ने ? संक्रमित भइहाले कसरी उपचार गर्ने ? आईसोलेशनमा कसरी बस्ने ? नबस्दा के समस्या हुन्छ ? आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जस्ता आधारभूत ज्ञानसहित जनचेतना कार्यक्रम बनाई सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी होउन भन्ने उदेश्यले स्वदेशी र विदेशी विज्ञसहितको परामर्शबाट बनाउँदा विश्वासिलो हुनेछ ।
सुशासन संयन्त्र बनाऊँ
हामी कहाँ नीति नियम बन्छन् तर त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन नै जटिल हुने गरेको छ । कार्यान्वयनको आधार नै नबनाई नीतिनियम बनाइनु अर्धविकसित देशको साझा प्रवृति नै हो । माथि उल्लेखित बुँदामा जे जस्ता कार्यक्रम बनाउँछौ तिनीहरूको सहज कार्यान्वयन हुनेगरी आवश्यक संयन्त्र बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । संक्रमण भएको शंका लागे के गर्ने ? उपचार गर्नेले के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने ? कसरी सल्लाह र परामर्श दिने ? उपचारमा संलग्न चिकत्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं कसरी संक्रमित हुनबाट जोगिने ? आदि प्रश्नको उत्तर आउने गरी आवश्यक संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । आजको विश्व व्यापीकरणको दुनियाँमा यस्ता समस्या कुनै न कुनै रुपमा आइरहन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि विशिष्ट खालको स्थायी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा विश्वनीयता बढ्नेछ ।
यस्ता समस्या निराकरणको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुको स्तरीयता मात्र हेरेर पुग्दैन । उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको गुणस्तर कसरी कायम गराउने ? त्यसको नियमित अनुगमन संयन्त्रसहितको व्यवस्था गर्ने बेला यही हो । अहिले वीत्त नीतिलाई समेत आवश्यक परिमार्जन गरी खर्च बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले खानेपानी, अस्पताल, खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्य प्रशोधन गर्ने उद्योग, माछामासु बिक्रेता, खाद्य सामाग्रीको प्रकृतिहेरि बिक्रेता, खानेपानी आपूर्तिकर्ता र उत्पादक आदिलाई कसरी कामगर्ने, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतममापदण्ड तय गरेर नियमित अनुगमनको संयन्त्र स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरिएन भने यस्ता सरुवा रोग, महामारी आदिको समस्या परिरहने छन । यी सबै कुरा आजसम्म जसरी चले । अब उप्रान्त त्यसरी चल्ने अवस्था छैन भन्नेमा सरकार र सम्वन्धित निकायले बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले सम्वन्धित सबैलाई १ सातादेखि ३ महिना वा प्रकृतिहेरी त्यो भन्दा लामो समयको तालिम, कक्षा लगायतका प्रावधान बनाउँदा सेवा प्रभावकारी हुनेछ ।
कोरोनाका कारण विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली मध्यबाट ठूलो संख्या फर्किने अवस्था बन्न सक्छ । यसो गर्दा उनीले विदेशमा काम गर्दा सिकेको ज्ञान र सीपलाई लागू गरी उद्योग, कृषि वा यस्तै व्यवसाय गर्न चाहेमा उनीहरूलाई छिटो र छरितो प्रावधान बनाएरै भएपनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
राहत कार्यक्रम आवश्यक
अहिले कोरोनाका कारण खास गरी अस्पतालले कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । समाजको तल्लो वर्ग कामविहीन बन्दै जाने अवस्था देखिँदैछ । त्यसैले समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गले रोजगार गुमाउँदाको अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया अपनाएर राहतका कार्यक्रम ल्याउँदा मौद्रिक तरलताको अवस्थामा सुधार हुन सक्छ । सरकारले साथसाथै सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसायका बैंकिङ्ग ऋण र किस्तालाई भुक्तान गर्ने अवधिलाई केही लम्वाउन लगाएर राहतको तयारी गर्दा उपयुक्त देखिन्छ, तर यसो गर्दा साँच्चै समस्यामा परेका क्षेत्र र व्यवसायको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादनका लागि अवसर खोजौँ
हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि उत्पादनका अवसर खोज्न छाेड्नु हुँदैन । प्रत्येक चुनौतिले अवसर पनि ल्याउँछ । यही अवसर पारेर सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी निश्चित खालका उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्दा बजार पनि पाइने र राष्ट्रिय आयमा योग दान पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सेनिटाइजर, मास्क, पेपररोल्स आदि बनाउने उद्योग अहिले स्थापित हुन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको गुणस्तर कायम गराउन पनि सजिलो हुनेछ, लगानी पनि यसतर्फ केन्द्रित बन्न सक्नेछ । जडीबुटी, हाम्रा घरेलु उत्पादनबाट पाउन सकिने फाइदालाई उजागर गर्ने र तिनीलाई व्यावसायिक रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने अवस्था हो भने त्यसतर्फ ध्यान दिँदा ती वस्तुलाई विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ । त्यस्ता अवसरको खोजी आवश्यक छ ।
रोजगारका क्षेत्रको पहिचानसहित प्राथमिकता दिऊँ
कोरोनाका कारण विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली मध्यबाट ठूलो संख्या फर्किने अवस्था बन्न सक्छ । यसो गर्दा उनीहरूले विदेशमा काम गर्दा सिकेको ज्ञान र सीपलाई लागू गरी उद्योग, कृषि वा यस्तै व्यवसाय गर्न चाहेमा उनीहरूलाई छिटो र छरितो प्रावधान बनाएरै भएपनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सामान्यतः कृषि, सेवा र निश्चित प्रकारका औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेर साना र मझौला खालका घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता राख्न सक्दा त्यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसो गर्दा हाम्रा जडिबुटी, परम्परागत उत्पादन लगायत कतिपय सामाग्री बनाउन सकिन्छ, त्यसको संभाव्यतामा जोड दिन सक्नुपर्छ ।
आधुनिक अर्थतन्त्र समस्या विहीन हुनु राम्रो हो तर सधै सम्भव छैन । समस्या आउँछन् भन्ने बुझेरै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संयन्त्र राम्रो बनाउन सक्दा मात्र यी र यस्ता खालका अरु समस्या सामान्य मेहनत गर्दा पनि समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसो गर्दा संस्थागत प्रक्रियातर्फ जनविश्वास पनि बढ्ने छ र कोरोना भाइरस मात्र होइन भावी दिनमा देखिने खालका सम्भावित अरु समस्यासँग जुध्न पनि सहजता हुनेछ ।